Home समाचार राजनीति प्रचण्ड-माधवलाई ओलीको अर्को कटाक्ष : सहिद भए श्रद्धाञ्‍जली दिन हुन्थ्यो, अब स्मरण...
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई फेरि आफूहरुसँग फर्कन आग्रह गरेका छन् । ‘आजकल उहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ । अचेल उहाँहरु मण्डलामा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । तर उनीहरु नआए पनि आफ्नो अभियान अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । प्रचण्ड-माधव समूहले ‘हामी यता छौँ’ नामको अभियानमूलक प्रदर्शन आफूबाट नक्कल गरेको पनि ओलीले दावी गरे । केहीअघि आफूले दिएको अभिव्यक्तिमा भनेको कुराबाटै उनीहरुले सुगाले झैँ नक्कल गरेको उनको जिकिर छ ।
ओलीले भने, ‘हामी यता छौँ हैन अब म यता छु भन्नूस् । आउनूस् । हामी फेरि यतै छौँ भन्नूस् ।’ उनले ब्यंग्य गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई बैठकमा खोजेको तर उनीहरु त सडकमा गएको र अहिले कता पुगे भन्ने थाहा नभएको पनि बताए । उनले अघि भने, ‘तपाईँहरु सहिद भएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो । तर तपाईँहरु सहिदत हैन ! ‘तपाईँहरुलाई कार्यक्रममा स्मरण गर्नुपर्ने आश्यकता पनि छैन । तर तपाईँहरुले धुलो उँडाउनुहुन्छ । हामीले पानी छम्किने हो । दुर्गन्ध फैलाउनुहुन्छ हामीले सफा गर्ने हो ।’
ओलीले प्रचण्ड समूहका नेताहरुलाई हरियो घाँसमा लुकेर बस्ने सर्पसँग पनि तुलना गरे । आइतबार काठमाडौँमा आफ्नो समूहको अनेरास्ववियुको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । केपी ओलीलाई कारवाही गरेको भनेको तर आफूले अझै पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका थिए । साथै वरिष्ठ नेता लगायत अन्य पदहरु कायम राखिएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । ‘कार्यकारी पद हटाइदिएको छु । वरिष्ठ पद यथावत छ,’ उनले भने । प्रचण्ड समूहका नेताहरुलाई कुर्सी चाहिएकोले आफूले कुर्सी पनि सुरक्षित राखिदिएको भन्दै उनले टिप्पणी गरेका थिए ।
Previous articleचन्द्रागिरी हिल्सले तोक्यो आईपीओ निष्काशन मिति !!
Next articleधेरै विर्य खेर फाल्दा यस्तो हुन सक्छ ! होशियार !
वामदेव मन्त्री बन्ने पक्का, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश !